खोड्पे बझाङ्ग सडक खण्ड अन्तरगत जयपृथ्वी राजमार्ग बिगत ५ दिन देखी अबरुद्ध ! - Sudur Khabar
खोड्पे बझाङ्ग सडक खण्ड अन्तरगत जयपृथ्वी राजमार्ग बिगत ५ दिन देखी अबरुद्ध !
बझाङ, असार ३० – पाँच दिनदेखि जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् । असार २५ गते बेलुका तमैल बजार नजिकै रहको माल्ला भिरमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक नै भासिने गरेर गएको पहिरो खुलाउने काम भइरहेको भए पनि लगातार पहिरो खसेका कारण सडक खुलाउन निकै समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ ।
सदररमुकाम चैनपुरमा थन्किएका गाडीहरु बढी मारमा परेका छन् । तमैल बजार भन्दा तल गाडी सञ्चालमा आए पनि तमैल देखि माथि रोकिएका गाडी भने ५ दिनदेखि बन्द छन् । लगातार ५ दिनसम्म गाडी रोकिँदा आफूहरुलाई निकै समस्या भएको लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने गाडीका चालकहरुले बताएका छन् ।
सडक खुलाउने काम भइरहेको भए पनि खुल्न सकेको छैन । बलौटे माटो भएका कारण पहिरो गइरहने भएका कारण निकै समस्या भएको र काम पनि जोखिम मोलेर गर्नुपर्ने भएको सडक खुलाउनका लागि काम गरिरहेका ठेकदार शेर बहादुर बोहराले बताउनुभयो । सडक अवरुद्ध भएपछि बझाङबाट काठमाडौं, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा तथा बाहिरी जिल्लाका लागि छुट्ने सबै गाडीहरु बसपार्क, तमैल बजारमा नै थन्किएका छन् । त्यस्तै यात्रुहरु भने अलपत्र परेका छन् ।
यातायात सञ्चालन नभएपछि अस्पतालले रिफर गरेका बिरामीहरुलाई निकै समस्या भएको भैरबनाथका स्थानीय बासिन्दा गोविन्द बोहराले बताउनुभयो । ।
त्यस्तै पहिरोका कारण जिल्लाको आन्तरिक यातायात सञ्जाल पनि बिच्छेद भएको छ । विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेर सडक बिग्रिएपछि जिल्ला भरका सबै जसो शाखा सडकहरु पनि अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी बझङले कार्यालयले जनाएको छ ।